किन स्थगित भयो वाम गठबन्धनकाे ताप्लेजुङ–दार्चुला अभियान ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
किन स्थगित भयो वाम गठबन्धनकाे ताप्लेजुङ–दार्चुला अभियान ?
२० कात्तिक, ताप्लेजुङ । एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता संयोजन समितिका तर्फबाट सुरु गर्न लागेको ताप्लेजुङ–दार्चुला अभियान स्थगित गरेका छन् । एकता र तालमेलको सन्देश दिन आइतबारबाट सुरु गर्ने भनिएको एकहप्ते अभियान स्थगित गरिएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अभियानको पहिलो कार्यक्रमअन्तर्गत एमाले अध्यक्ष केपी ओली आइतबार ताप्लेजुङमा आयोजित चुनावी सभामा सहभागी भए पनि चुनावी कार्यक्रमको व्यस्तताका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल प्रचण्ड सहभागी भएनन् । उनी आफ्नो चुनावी क्षेत्र चितवन–३ मा व्यस्त छन् ।
‘नेताहरूको चुनावी व्यस्तताका कारण अहिलेलाई अभियान स्थगित भएको छ, आपसी सल्लाहमा फेरि सुचारु हुन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने । यद्यपि, जिल्लादेखि गाउँ तहसम्म संयुक्त भेला, चुनावी सभालगायत कार्यक्रम भने जारी रहेको उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
Previousउपेन्द्रलाई तनावै तनाव, यस्तो छ कारण
NextCIAA grills three including former Chief Secy in purchase of transformers